အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ DeltaFosB သော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ။ (2008) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
DeltaFosB, Neuroplasticity နှင့်စွဲမှု
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ DeltaFosB သော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ။ (2008)
Synapse. 2008 May;62(5):358-69.
Perrotti LI, Weaver RR, Robison B, Renthal W က, ဝင်္ငါ Yazdani S က, Elmore RG, Knapp DJ သမား, Selley DE, မာတင် BR, Sim-Selley L ကို, Bachtell RK, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။
စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, တက္ကသိုလ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အနောက်တောင်ပိုင်း Medical Center မှာ, Texas ပြည်နယ် Dallas 75390-9070, USA ။
အဆိုပါကူးယူအချက် DeltaFosB စုဆောင်းနှင့်နာတာရှည်ဆွတုံ့ပြန်ဦးနှောက်ထဲမှာဆက်ရှိနေသေး။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့ပြီးနောက်ဤသည်စုဆောင်းခြင်း dorsal striatum (caudate / putamen) နှင့်နျူကလိယ accumbens အပါအဝင် striatal ဒေသများအတွက်အများဆုံးသိသိသာသာအနောက်တိုင်းချေအားဖြင့်ယခင်ကသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးကုသမှုပြီးနောက်ကြွက်ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံး သာ. ကြီးမြတ်ခန္ဓာဗေဒတိနှင့်အတူ DeltaFosB ၏ induction သတ်မှတ်ပေးရန် immunohistochemistry ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းအလွဲသုံးစားမှု, အီသနောနှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (9) -tetrahydrocannabinol (မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (9) -THC, ဆေးခြောက်များတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်း) ၏နှစ်ခုအပိုဆောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများမှကိုကင်း, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်နီကိုတင်းပါဝင်သောယခင်သုတေသနတိုးချဲ့။ ကျနော်တို့လေးယောက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး, ကင်း, မော်ဖင်းအကိုက်, အီသနောနှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (9) -THC ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏နာတာရှည်, ဒါပေမယ့်မရစူးရှ, အုပ်ချုပ်ရေးစေ့စ့စပ်စပ် shell ကိုငျဒသေ vs. အဓိကများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြစ်သော်လည်းနျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB induces ဒီနေရာမှာပြသ ဒီနျူကလိယ၏ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်သိသာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများလည်း dorsal striatum အတွက် DeltaFosB သော induction ၎င်းတို့၏ဘွဲ့အတွက်ကွဲပြားပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အားလုံးလေးယောက်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုကင်းနှင့်အအီသနောနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာအကြီးမြတ်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ, prefrontal cortex အတွက် DeltaFosB သွေးဆောင်သဖြင့်, မူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံး amygdala အတွက်သေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာအထိ DeltaFosB သွေးဆောင်။ ထို့အပွငျ, ရှိသမျှမူးယစ်ဆေးဝါး hippocampus အတွက် DeltaFosB သွေးဆောင်လျက်, အီသနော၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, ဒီ induction အများစုက dentate တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ DeltaFosB သော induction ၏အောက်ခြေအဆင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုကိုတုံ့ပြန်အခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အလွဲသုံးစားမှုနီးပါးအားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်ဘုံအရေးယူမှုသည်နှင့်အကြောင်း, နျူကလိယ accumbens တဘက်, တစ်ဦးချင်းစီကမူးယစ်ဆေးဝါးဦးနှောက်ထဲမှာဒေသ-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ DeltaFosB induces နျူကလိယအတွက် DeltaFosB ၏ induction accumbens နောက်ထပ်သက်သေသာဓကများကို.
ကိုကင်းဖို့ acute ထိတွေ့မှု (။ , Graybiel et al 1990; မျှော်လင့် et al, 1992; ။ ။ လူငယ် et al, 1991) striatal ဒေသများအတွက်ကူးယူအချက်များက c-Fos နှင့် FosB ၏ယာယီသော induction ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, မူးယစ်ဆေးရလဒ်များကိုမှနာတာရှည်ထိတွေ့သော်လည်း (။ , Hiroi et al 1997; မျှော်လင့် et al, 1994; ။ Moratalla et al, 1996; ။ Nye et al, 1995 ။ ) ΔFosB၏တည်ငြိမ် isoforms, အ fosB ဗီဇတစ်ခုခြင်းကို splice မူကွဲများစုစည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတာနဲ့သွေးဆောင်, ΔFosBပရိုတိန်း၏ပုံမှန်မဟုတ်သောတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာဤဒေသများတွင်ဆက်ရှိနေသေး။ ပိုများသောမကြာသေးမီကသုတေသနပြုΔFosBရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုအပြည့်အဝ-အရှည် FosB အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအ Fos မိသားစုပရိုတိန်း (Carl et al ။ , 2007) ၏ C-termini တှငျတှေ့ degron domains များမရှိခြင်းတို့ကနှင့်၎င်း၏ N ကိုမှာΔFosB၏ phosphorylation ကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းပြသထားပါတယ် -terminus (Ulery et al ။ , 2006) ။ ဆနျ့ကငျြ, နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးΔfosB mRNA မဟုတ်သလိုနောက်ထပ်ΔFosBပရိုတိန်းများစုစည်းနေခြင်းပါဝင်ပတ်သက်မြင်သာထင်သာယန္တရားကြောင်းကိုညွှန်ပြပေးသော mRNA (Alibhai et al ။ , 2007) ၏တည်ငြိမ်မှုသို့ fosB premRNA ၏ splicing ပြောင်းလဲပစ်မထားဘူး။
ကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားအထူးသဖြင့် striatal ဒေသများတွင်ΔFosBသော induction သည်, ventral striatum သို့မဟုတ်နျူကလိယ accumbens, စွဲလမ်း၏ရှုထောင့်ဖြန်ဖြေအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်း။ ညွှန်ပြ သွေးဆောင် bitransgenic ကြွက်ဤဒေသများတွင်ΔFosB၏ Overexpression, ဒါမှမဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းမှတဆင့်, ΔFosBတစ်ဦးကြီးစိုးကအနုတ်ရန်၏စကားရပ်သော်လည်း, ထို locomotor-ကိုသက်ဝင်နှင့်ကိုကင်းများနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်အကြိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်ရဲ့ sensitivity တိုးပွါး (Δc-ချေါ ဇွန်) ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများ (Kelz et al, 1999 ရှိပါတယ်;, Peakman et al 2003;; ။ ။ McClung နှင့် Nestler, 2003 Zachary et al, 2006) ။ ။ ΔFosB overexpression လည်းကင်းဘို့မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီး (Colby et al ။ , 2003) ။ ထိုမှတပါး, ΔFosBဦးစားစွဲဖို့သူတို့ရဲ့တိုးမြှင့်အားနည်းချက် (Ehrlich et al ။ , 2002) ကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအရာ, ဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကိုကင်းများကသွေးဆောင်သည်။
ဒီသက်သေအထောက်အထားတွေရှိနေသော်လည်းအရေးကြီးသောမေးခွန်းများကိုရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ကြွဆေး, စိတ်ကြွဆေး, မော်ဖင်းအကိုက်, နီကိုတင်းနှင့် phencyclidine အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုအတော်ကြာအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးသော်လည်း, Atkins et al (striatal ဒေသများတွင်ΔFosBသွေးဆောင်အစီရင်ခံခဲ့ကြ, 1999; ။ Ehrlich et al, 2002; ။ McDaid et al ။ 2006b; Muller နှင့် Unterwald, 2005; Nye et al, 1995; ။ Nye နှင့် Nestler, 1996; Pich et al 1997; ။ ။ Zachary et al, 2006), အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမသတင်းအချက်အလက်အီသနောနှင့်Δ9-tetrahydrocannabinol ၏လုပ်ရပ်များကိုရည်မှတ်ရရှိနိုင် (Δ9-THC, ဆေးခြောက်များတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်း) ။ နှစ်ဦးကိုကြိုတင်လေ့လာမှုများ FosB ကဲ့သို့ immunoreactivity အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း hippocampus နှင့်အချို့ကအခြားဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်သွေးဆောင်, ဒါပေမယ့်ဒီ immunoreactivity ΔFosBသို့မဟုတ် Full-အရှည် FosB (Bachtell et al ကိုယ်စားပြုခြင်းရှိမရှိမသေချာမရေရာဖြစ်နေဆဲကြောင်းပြ 1999; ။ Beckmann et al, 1997 ။ ) ။ အီသနော၏လေ့လာမှုနှင့်ဤ US မှာအလွဲသုံးမှုယနေ့အများဆုံးကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများ (SAMHSA, 9) ၏နှစ်ခုကြောင့် (Δ2005-THC, အထူးသဖြင့်အရေးကြီးလှသည်။ ထို့အပြင်, အလွဲသုံးစားမှုလှုံ့ဆော်သို့မဟုတ် opiate မူးယစ်ဆေးဝါးΔFosBသွေးဆောင်ပြခဲ့ကြပေမယ့် accumbens နှင့် dorsal striatum nucleus များအပြင်၌, prefrontal cortex, amygdala, ventral pallidum, ventral tegmental ဧရိယာနှင့် hippocampus (လျူ et al ပါဝင်သည်ရသော, အချို့နဲ့အခြားအထီးကျန်ဦးနှောက်ဒေသများ, 2007; ။ ။ McDaid et al, 2006a, 2006b; Nye et al, 1995; ။ ။ Perrotti et al, 2005), နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့တုန့်ပြန်ဦးနှောက်ထဲမှာΔFosBသော induction တစ်စနစ်တကျမြေပုံပေးခြင်းမရှိပေ။
ကိုကင်း, မော်ဖင်းအကိုက်, အီသနောနှင့်Δ9-THC: ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်အလွဲသုံးစားမှုလေးယောက်ရှေ့ပြေးပုံစံမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုအပြီးဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးΔFosB၏ induction map မှ immunohistochemical လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသုံးပါဖို့ပဲ။
အားလုံးစမ်းသပ်ချက်အထီး Sprague Dawley ကြွက် (ချားလ်စ်မြစ်, Kingston, 250-275 ဂရမ်) ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်ချက်စတင်မတိုင်မီတိရစ္ဆာန်များလှောင်အိမ်နှုန်းနှစ်ခုသျောနှင့်တဦးတည်းတစ်ပတ်တိရစ္ဆာန်အခန်းထဲမှာအခြေအနေများ habituated ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကအစားအစာနှင့်ရေအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ စမ်းသပ်ချက်ရှိ Dallas မှာတက္ကသိုလ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အနောက်တောင်ပိုင်း Medical Center မှာမှာ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကပြန်လည်သုံးသပ် protocols များနှင့်အညီကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
6 နေ့ရက်ကာလအဘို့ 15% ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်း; ကြွက် (ဎ = အုပ်စုကိုနှုန်း 0.9) ကိုကင်း Hydrochloride (မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, Bethesda, MD အပေါ်အမျိုးသား Institute မှ 14 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် ip) ၏နှစ်ကြိမ်-နေ့စဉ်ဆေးထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်ရေးကြွက် (အုပ်စုတစ်စုနှုန်းဎ = 6) သည်အတူတူပင်နာတာရှည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်မှာ 0.9% ဆား၏ ip ထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အားလုံးထိုးတိရစ္ဆာန် '' အိမ်မှာလှောင်အိမ်ထဲမှာပေးထားခဲ့ကြသည်။ ဒီကုသမှု regimen (မျှော်လင့် et al ကြည့်ပါ။ , 1994) ခိုင်မာတဲ့အမူအကျင့်များနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ထုတ်လုပ်ပြသလျက်ရှိသည်။
တိရစ္ဆာန်များ (ဎ = အုပ်စုကိုနှုန်း 6) sucrose တောင့် Mg တစ် 45 များအတွက်လီဗာကိုနှိပ်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ (Sutton et al ။ , 2000) ဒီလေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက်, တိရိစ္ဆာန်များကြော်ငြာ libitum တိုက်ကျွေးခဲ့ကြခြင်းနှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ခွဲစိတ်တဲ့နာတာရှည် jugular ပြွန် (Silastic Tube, အစိမ်းရောင်ရော်ဘာ, Woburn, MA) နဲ့ pentobarbital မေ့ဆေးအောက်မှာထဲထညျ့။ အဆိုပါပြွန် cranioplastic ဘိလပ်မြေအတွက် embedded တစ် 22-gauge cannula (ပလတ်စတစ်တစ်ခုမှာ, ရော့, VA သို့) မှတဆင့်နောက်ကျောမှထွက်ရန်အရေပြားအောက်ဆုံးလွန်နှင့် Marlex ခွဲစိတ်ကွက် (Bard, Cranston, RI က) နဲ့လုံခြုံ။ self-အုပ်ချုပ်ရေးဆက်စပ်အခြေအနေတိရစ္ဆာန်ရဲ့အိမျလှောင်အိမ်ကနေကွဲပြားနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခန်း၌တည်ရှိသောဖြစ်ကြောင်းအော်ပရေတာစမ်းသပ်အခန်းများ (Med Associates မှ, စိန့် Alban, VT) တွင်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းထဲသို့တစ်ဦး Razel Model ရဲ့တစ်ဦးကစုပ်စက် (Stamford, မှန် CT) ပါဝင်သည်ဟုတစ်ခုပြုတ်ရည်စုပ်စက်စုဝေး Teflon Tube ကအရည်ဆုံလည် (Instech, Plymouth အစည်းအဝေး, PA) နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့ 10 ml ကိုဖန်ပြွတ်တပ်ဆင်ထားအသံ-attenuating cubicle အတွက်ပူးတွဲခဲ့သည် ။ Tygon Tube တိရစ္ဆာန်ရဲ့ပြွန်စည်းဝေးပွဲကိုရန်ဆုံလည်ချိတ်ဆက်နှင့်သတ္တုနွေဦးတို့ကပူးတွဲခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအော်ပရေတာအခန်းထဲကနှစ်ခုခရိုနီ (4 ×2cm2, ကြမ်းပြင်ကိုချွတ်တည်ရှိသော2စင်တီမီတာ) ပါရှိသည်။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းတက်ကြွစွာလီဗာအပေါ်တစ်ခုတည်း 20 ဆလီဗာ-စာနယ်ဇင်းကင်းတစ်ခုဃပြုတ်ရည်ကိုအပ်မယ့် 0.5-s ကိုပြုတ်ရည်ကြားကာလကျော် (0.1 / ကီလို5ml ကိုပြုတ်ရည် mg) ။ အဆိုပါပြုတ်ရည်အိမ်တော်ကိုအလင်းငွိမျးခံခဲ့ရသည်နှင့်မျှမ Programs အကျိုးဆက်များထုတ်လုပ်တုံ့ပြန်သည့်ကာလအတွင်းတစ်ဦး 10-s ကိုအချိန်ထွက်ကာလကနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ အိမ်သူအိမ်သားအလငျး၏ illumination အချိန်ကိုထွက်ကာလ၏အဆုံးအချက်ပြ။ အဆိုပါလှုပ်ရှားလီဗာပေါ်လီဗာ-စာနယ်ဇင်းအဘယ်သူမျှမအကျိုးဆက်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မှောင်မိုက်သံသရာစဉ်အတွင်း 14 နေ့စဉ် 4-ဇစမ်းသပ်အစည်းအဝေးများ (6 ရက် / တပတ်) စဉ်အတွင်းတိရစ္ဆာန်များကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်း; ပျမ်းမျှအားဖြင့်နေ့စဉ်စားသုံးမှု ~ 50 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထမ်းဘိုးကိုတိရစ္ဆာန်များ၏တစ်ဦးကအုပ်စုတစ်စုဟာသူတို့ရဲ့ Self-စီမံခန့်ခွဲ counterparts တွေကိုမူးယစ်ဆေးကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါမှသာသူတို့ကင်းတာဟာလက်ခံရရှိတူညီကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ ဆားထိန်းချုပ်မှုတိရစ္ဆာန်များ၏တစ်ဦးကအုပ်စုတစ်စုဆားတာဟာအဘို့အလီဗာစာနယ်ဇင်းခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဒီကုသမှု regimen (Sutton et al ကြည့်ပါ။ , 2000) ခိုင်မာတဲ့အမူအကျင့်များနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ထုတ်လုပ်ပြသလျက်ရှိသည်။
မော်ဖင်းအကိုက်လုံးလေးများ (တစ်ဦးချင်းစီမော်ဖင်းအကိုက်အခြေစိုက်စခန်း၏ 75 မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့; မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု)5နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်ချိန်ကနေ့စဉ် SC ကိုထညျ့သှငျး (ဎ = 6) ခံခဲ့ရသည်။ ထိန်းချုပ်ရေးကြွက်အတုအယောင်5ရက်ဆက်တိုက်ခွဲစိတ်ကုသ (ဎ = 6) ခံယူ။ ဒီကုသမှု regimen (Nye နှင့် Nestler, 1996 ကိုကြည့်ပါ) ခိုင်မာတဲ့အမူအကျင့်များနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ထုတ်လုပ်ပြသလျက်ရှိသည်။
9: 1 အီသနော၏ဖြေရှင်းချက် emulphor နှင့်ဆားΔ1-THC တစ် 18 အတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ကြွက်9နေ့ရက်ကာလအဘို့Δ15-THC, ဒါမှမဟုတ်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူအရေပြားအောက်ဆုံးနှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ Δ9-THC ၏ကနဦးဆေးထိုး 10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်နှင့်ဆေးထိုး 160 ၏နောက်ဆုံးထိုးသည်သုံးရက်ပတ်လုံးနှစ်ဆတက်ခဲ့ပါတယ် / ကီလိုဂရမ် MG ။ ဒီကုသမှု regimen ဒီမျိုးစိတ် (Sim-Selley နဲ့ Martin, 9) တွင်ကြံ့ခိုင်အပြုအမူနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ထုတ်လုပ်ပြသခဲ့ပြီးသောကြောင့်, ငါတို့သည်Δ2002-THC များအတွက်ကြွက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
(95% စတော့ရှယ်ယာထံက၎င်း, Aaper, Shelbyville, KY) အီသနောဟာအာဟာရပြည့်စုံအရည်အစားအသောက်များတွင်အားဖွငျ့အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဤသည်စံအစားအသောက်အီသနောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း,7နေ့ရက်ကာလအဘို့ 17% [အလေးချိန် / အသံအတိုးအကျယ် (wt / vol)] ၏အုပ်ချုပ်မှုတစ် lactalbumin / dextrose-based အစားအစာထဲမှာအီသနောကပါဝင်ပတ်သက်အချိန်ကြွက်ယေဘုယျအား 8-12 g / ကီလိုဂရမ် / နေ့မှာအီသနောလောင်ရာစဉ်နှင့် / dl (; Frye et al, 200; ။ Knapp et al, 1993 ။ Criswell နှင့် Breese, 1981) mG 1998 မှတက်သောအသွေးကိုအီသနောအဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ရန်။ အစားအသောက်များတွင်အီသနော-ကုသကြွက်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များကိုဖြတ်ပြီး) dextrose နှင့်အတူ (ဗီတာမင်, သတ္တုဓာတ်နှင့် ICN သုတေသန Diet မှဆင်းသက်လာသည်အခြားအာဟာရပါဝင်မှုနှင့်အတူ (အာဟာရပြည့်စုံခြင်းနှင့်ကယ်လိုရီမျှမျှတတဖြစ်ခဲ့သည်။ စားသုံးမှုကိုက်ညီခြင်းတစ်ထိန်းချုပ်မှုအစားအသောက်များတွင်-ကုသကြွက်ပေးခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည် ယင်းအီသနောဓာတ်စာ-ကုသကြွက်၏ပျမ်းမျှစားသုံးမှုမတိုင်မီနေ့တဲ့အစားအစာနှင့်ညီမျှ၏အသံအတိုးအကျယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအလွယ်တကူ (မပြ) ကိုအီသနောထိတွေ့မှုကာလအတွင်းအလေးချိန်ရရှိခဲ့သည်။ ဒီကုသမှု regimen အားကောင်းတဲ့အမူအကျင့်များနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ထုတ်လုပ်ပြသခဲ့ပြီး (Knapp တွေ့မြင် et al ။ , 1998) ။
24 ဇမှတဆယ်ရှစ်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးကုသမှုပြီးနောက်, တိရိစ္ဆာန်များနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည် (Sigma, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို) နဲ့ anesthetized ခဲ့ကြသည်နှင့်အ intracardially အတွက် 200% paraformaldehyde ၏ 10 ml အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 400 MM ဖော့စဖိတ်-buffered ဆား (PBS) ၏4ml နှင့်အတူ perfused PBS ။ ဦးနှောက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 4% paraformaldehyde အတွက်နေ့ချင်းညချင်းသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာဦးနှောက် cryoprotection များအတွက် 20 M က PBS ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ 0.1% က glycerol ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ မှု Coronal အပိုင်း (40 μm) တစ်ခဲ microtome (Leica, Bannockburn, IL) အပေါ်ဖြတ်ပြီးတော့ immunohistochemistry များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်။ ΔFosBနှင့် FosB immunoreactivities နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောယုန် polyclonal antisera သုံးပြီးတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ΔFosBအတွက်ပျက်ကွက်သော FosB ကို C-terminus (aa 317-334) ဆန့်ကျင်ကြီးပြင်းတစ်ခုမှာ antiserum full-အရှည် FosB အသိအမှတ်ပြုပေမယ့်မပေးΔFosB (Perrotti et al ။ , 2004) ။ အခြား antiserum,a"ကိုဒယ်အိုး-FosB" antibody ကို, FosB တစ်ခုပြည်တွင်းရေးဒေသဆန့်ကျင်ထမြောက်တော်မူခြင်းနှင့် FosB နှင့်ΔFosBနှစ်ဦးစလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် (SC-48; Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz,, CA) ။
FosB ကဲ့သို့အစွန်းအထင်းအတွက် avidin-ဓါတ် peroxidase ရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့, ဦးနှောက်အပိုင်းပထမဦးဆုံး nonspecific တံဆိပ်ကပ် minimize လုပ်ဖို့ 0.3% ထရီ X-2 နှင့် 2% ပုံမှန်ဆိတ်သငယ်ကိုသွေးရည်ကြည်အတွက် 1 ဇများအတွက်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးထို့နောက် endogenous peroxidases ဖျက်ဆီးဖို့ 0.3% H100O3 နဲ့ကုသခံခဲ့ရသည်။ တစ်သျှူးအပိုင်းထို့နောက် 1% ပုံမှန်ဆိတ်သငယ်ကိုသွေးရည်ကြည်, 0.3% ထရီ X-100 နှင့်ဒယ်အိုး-FosB antibody ကို (1 5000) တွင်အခန်းအပူချိန်မှာနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများဆေးကြော 1.5 အတွက် 1 ဇတို့အတွက်ထားရှိခဲ့ကြသည်: ဆေးကြော biotinylated ဆိတ်သငယ်ကို-antirabbit immunoglobulin (DakoCytomation, Carpinteria,, CA) ၏ 200 dilution နှင့် 1.5 အတွက် 1 ဇတို့အတွက်ထားရှိ: အ Elite ကိရိယာအစုံကနေ avidin-ဓါတ်ရှုပ်ထွေးသော၏ 200 dilution (Vector ဓါတ်ခွဲခန်း, Burlingame,, CA) ။ Peroxidase လှုပ်ရှားမှု diaminobenzidine (Vector Laboratories) နဲ့တုံ့ပြန်မှုများကမြင်ခဲ့သည်။ coded ဆလိုက် FosB-immunoreactive ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ code တွေကိုပြီးပြည့်စုံခဲ့တစ်ဦးချင်းစမ်းသပ်မှု၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်အထိကျိုးပဲ့မခံခဲ့ရပါဘူး။
FosB ကဲ့သို့ immunoreactivity ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်တပြိုင်နက်, FosB-တိကျတဲ့နှင့်အတူနှစ်ဆချောင်းတံဆိပ်ကပ်ခြင်း (ကို C-terminus; 1: 500) antibody ကိုနှင့်ဒယ်အိုး-FosB antibody ကို (SC-48; 1: 200) ကိုသွေးဆောင်ပရိုတိန်းအမှန်ပင်ခဲ့လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့သည် ΔFosB။ တစ်ဦးကထုတ်ဝေ protocol ကို (Perrotti et al ။ , 2005) အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါပရိုတိန်း CY2 နှင့် CY3 fluorophore-တံဆိပ်ကပ်အလယ်တန်းပဋိ (Jackson က ImmunoResearch Laboratories, အနောက် Grove, PA) ကို အသုံးပြု. မြင်ခဲ့ကြသည်။ ပရိုတိန်းထုတ်ဖော်ဒေသခံတစ်ဦး confocal ဏုအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် (Axiovert 100; 510, 488 နှင့် 543 ၏ META ထုတ်လွှတ်လှိုင်းအလျားနှင့်အတူ LSM 633; Zeiss, Thornwood, နယူးယော့) ။ ဤနေရာတွင်တင်ပြပုံများဒီစနစ်အပေါ်ဖမ်းမိခြင်းနှင့် Z-လေယာဉ်မှတဆင့်တစ်ဦး 1 μm-ထူအပိုင်းကိုကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။
သိသာသော osFosB + ဆဲလ်များကို t-tests သို့မဟုတ် ANOVAs ကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်သည်။ Newman-Keuls test သည် post-hoc analysis ဖြစ်သည်။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်များအတွက်တညျ့ခဲ့ကြသည်။ ဒေတာ SEM ±ယုတ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကို P <0.05 အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
တိုက်ရိုက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးအမျိုးမျိုးတုန့်ပြန်ဦးနှောက်ထဲမှာΔFosBသော induction များ၏ပုံစံများကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ကျနော်တို့လေးယောက်ရှေ့ပြေးပုံစံမူးယစ်ဆေးဝါး, ကင်း, မော်ဖင်းအကိုက်, အီသနောနှင့်Δ9-THC အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ပြီးခဲ့သည့်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်ΔFosBစကားရပ် 18-24 ဇလေ့လာ ။ ကျနော်တို့ (ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများအပိုင်းကိုကြည့်ပါ) နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏အမူအကျင့်များနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျး sequelae ထုတ်လုပ်ရန်စာပေအတွက်သရုပ်ပြခဲ့ကြရသောစံမူးယစ်ဆေးကုသမှု regimen, ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ΔFosB၏အဆင့်ဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များနှင့်စွဲလမ်းထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ midbrain နှင့် Fore-ဦးနှောက်ဒေသများအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူ immunohistochemistry အားဖြင့် quantified ခဲ့ကြသည်။ ΔFosBသော induction ၏ဤဒဏ်ငွေမြေပုံΔFosBနှင့် Full-အရှည် FosB နှစ်ဦးစလုံးအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဒယ်အိုး-FosB antibody ကိုအတူဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ Full-အရှည် FosB များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ antibody ကို (ပစ္စည်းနှင့်နည်းစနစ်များအပိုင်းကိုကြည့်ပါ) မပါအပြုသဘောဆဲလ်ရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကသို့သော်ကျနော်တို့ immunoreactivity အပေါငျးတို့သမူးယစ်ဆေးအသီးအသီးအဘို့, ရှုလေ့လာသင်သိရ, တစ်ခုတည်းကိုသာΔFosBကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဒယ်အိုး-FosB antibody ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိအားလုံး immunoreactivity သည်အခြား Fos မိသားစုပရိုတိန်းဆန့်ကျင်အဖြစ် fosB ဗီဇထုတ်ကုန်အဘို့ဤ antibody ကို၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်အတည်ပြုသော fosB နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားထိန်းချုပ်မှုပုံ 1 အတွက်ကင်းဘို့ပြနေကြသည်, ဒါပေမယ့်အားလုံးအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအဖြစ်ကောင်းစွာ (ပြမဟုတ်) များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ 18-24 ဇအချိန်အမှတ်မှာနောက်ဆုံးမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်ပြည့်အရှည် FosB ၏ရှိသမျှတို့, နိမ်မည်ဟုမျှော်လင့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြောင့်ဤတွေ့ရှိချက်ကိုသာ fosB ဗီဇအဖြစ်ပိုမိုတည်ငြိမ်ΔFosBထွက်ခွာ, အံ့သြစရာမဟုတ် ထုတ်ကုန် (။ ။ မျှော်လင့် et al, 1995 ချန် et al ကြည့်မြင် 1994) ကျန်ရှိနေသေးသော။
ပြင်းထန်သောသို့မဟုတ်နာတာရှည်ကိုကင်းနှင့်ကုသသောတိရိစ္ဆာန်များအားနျူကလိယမှတဆင့် FosB (pan-FosB, Santa-Cruz) သို့မဟုတ် Anti-FosB (C-terminus) antibody ကို အသုံးပြု၍ fluorescence immunohistochemistry ကို double-label တပ်ခြင်း။ pan-FosB antibody ကိုအစွန်းအထင်းများ (ပိုမို…)
ဤလေ့လာမှု၏ခြုံငုံတွေ့ရှိချက်များ၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်သော induction ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကွဲပြားပုံစံများနှင့်အတူအသီးအသီးမူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့မြင်ကြပေမယ့်လေးပါးကိုမူးယစ်ဆေးတစ်ခုစီ, သိသိသာသာဦးနှောက်ထဲမှာΔFosBသွေးဆောင်ရှာတွေ့ခဲ့သည်စားပွဲတင်ဗြဲအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
striatal ဒေသများတွင်ΔFosB၏ induction
ΔFosB၏ဆုံးသိသိသာသာသော induction နျူကလီးယပ် accumbens အပေါင်းတို့နှင့်လေးမူးယစ်ဆေးဝါးများပရိုတိန်းသွေးဆောင်ဘယ်မှာ dorsal striatum (caudate / putamen), တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည် (ပုံ။ 2-ပုံ။ 4) ။ ဒါဟာပုံ5အတွက် quantitative ပြသနေသည်။ ΔFosBသော induction မူးယစ်ဆေးအများစုများအတွက်အဓိကတွင်တွေ့မြင်ဆိုနိုင်သည်ထက်ပိုသော induction နှင့်တကွ, နျူကလိယ accumbens ၏နှစ်ခုစလုံး core နဲ့ shell ကိုငျဒသေတှငျတှေ့မွငျခဲ့သညျ။ ΔFosB၏ကြံ့ခိုင်သော induction ကိုလည်းမူးယစ်ဆေးအများစုများအတွက် dorsal striatum အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုချွင်းချက် (။ , စားပွဲတင်ငါပုံ9ကိုကြည့်ပါ) ကိုသိသိသာသာနျူကလိယအတွက်ΔFosBသွေးဆောင်မပြုခဲ့ရသောΔ4-THC အားခေတ်ရေစီးကြောင်းရှိနေသော်လည်း shell ကိုသို့မဟုတ် dorsal striatum accumbens ဖြစ်ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအီသနောဟာနျူကလိယအတွက်ΔFosB၏အကြီးမြတ်ဆုံးသော induction အခြားကုသမှုနှိုင်းယှဉ် core ကို accumbens ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကြွက်၏နျူကလိယတွင် osFosB ကို induction သည်ထိန်းချုပ်သောကြွက် (A) တွင်သို့မဟုတ်အီသနော (ခ)၊ မော်ဖင်းအကိုက် (C) သို့မဟုတ်ကိုကင်း (D) နှင့်နာတာရှည်ကုသမှုပြုလုပ်ပြီးနောက် accumbens ။ FosB ကဲ့သို့သော immunoreactivity အဆင့်များကို pan-FosB antibody ကို အသုံးပြု၍ immunohistochemistry မှလေ့လာခဲ့သည်။ (နောက်ထပ် …)
နာတာရှည်Δ9-THC ကုသမှုပြီးနောက်ကြွက် ဦး နှောက်ထဲမှာ osFosB ၏ induction ။ FosB ကဲ့သို့သောခုခံအားကျဆင်းမှုအဆင့်များအားထိန်းချုပ်ခြင်း (A, C, E) နှင့်နာတာရှည်Δ9-THC (B, D, F) တိရိစ္ဆာန်များကို သုံး၍ pan-FosB antibody ကိုသုံးပြီး immunohistochemistry မှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ မှတ်စု (နောက်ထပ်…)
နာတာရှည် morphine, ,9-THC, အီသနောနှင့်ကိုကင်းကုသပြီးနောက် striatal ဒေသများတွင် osFosB သော induction ၏အရေအတွက်။ ဘားဂရပ်များကထိန်းချုပ်ထားသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ခံရသည့်တိရိစ္ဆာန်များ osFosB + ဆဲလ်အရေအတွက်ကိုပြသည်။
striatal ဒေသများတွင်ΔFosB၏အံ့သြဖွယ်သော induction ပေးထားကျနော်တို့ကဤဒေသများအတွက်ပရိုတိန်းသွေးဆောင်ဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စွမ်းရည်ကိုအတင်းအကျပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှကုသိုလ်ကံတစ် function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်ကျနော်တို့ 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းနှင့်အထမ်းဘိုးကိုကင်းတာဟာသာဆားလက်ခံရရှိသောသူတို့ခံသောသူတို့အားဤတိရိစ္ဆာန်များအတွက်နှိုင်းယှဉ်ΔFosBသော induction ကြောင့်ကြွက်၏အုပ်စုတစုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ပုံ 6, စေ့စ့စပ်စပ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ လက်ခံ. အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမူးယစ်ဆေးနှိုင်းယှဉ်ဘို့မြင်ကြသော induction ၏ညီမျှသောဒီဂရီနှင့်တကွ, နျူကလိယ accumbens (နှစ်ဦးစလုံးဟာ core နဲ့ shell ကိုခွဲဒေသများ) နှင့် dorsal striatum အတွက်ΔFosBသွေးဆောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းမှာပြထားတဲ့အတိုင်း။ 5: တိရစ္ဆာန်များဤအုပ်စုနှစ်စုတွင်တွေ့မြင်ΔFosBသော induction ၏အတိုင်းအတာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစမ်းသပ်မှု (နေ့စဉ်ဆေးများအတွက်ယူဆရမှုကြောင့်ကိုကင်းများ၏ပမာဏ၏အများကြီးပိုကြီးတဲ့ရန်, (။ ပုံ 50 ကိုကြည့်ပါ) ကိုကင်းများ၏ ip ထိုးနှင့်မြင်ကြောင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်ကြီး mg / kg ဃ vs. 30 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် ip) ။
နာတာရှည်ကိုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအပြီးတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဒေသများတွင် regionsFosB သော induction ၏အရေအတွက်။ ဘားဂရပ်များကထိန်းချုပ်သည့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ကိုကင်းကုသမှုခံယူသောတိရိစ္ဆာန်များ၊ အဓိကနှင့် osFosB + ဆဲလ်များ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်ကိုပြသည်။ (အသေးစိတ်…)
အဆိုပါ striatal ရှုပ်ထွေးသောအပြင်, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးသည်အခြား ဦး နှောက်ဒေသများရှိ inFosB သွေးဆောင် (ဇယား5ကိုကြည့်ပါ) ။ ဇယား ၁ တွင်တင်ပြထားသည့်အချက်အလက်များသည်ဘက်စုံထောင့်စုံဖြစ်ကြောင်းနှင့်သန္ဓေတားဒေသများအတွက်ဖျော်ဖြေသည့်အတိုင်း osFosB သော induction ၏တိကျသောအရေအတွက်ကိုကိုယ်စားမပြုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အလေးထားသင့်သည် (ပုံ - ၅ နှင့်ပုံ ၆) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ nonstriatal ဒေသများတွင်ΔFosBသော induction ၏ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါသည်: osFosB နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့ပြီးနောက် osFosB ၏တသမတ်တည်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကစာရင်းအင်းသိသိသာသာကြောင်းထိုကဲ့သို့သော Basal အခြေအနေများအောက်တွင်ဤဒေသများအတွက်လုံးဝနီးပါးရှာဖွေတွေ့ရှိသည် (P <6 by0.05) ။
အားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ကြံ့ခိုင်သော induction မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အီသနောအရှိဆုံးအလွှာထဲမှာအင်အားအကောင်းဆုံးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်ပုံနှင့်တကွ, prefrontal cortex တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည် (ပုံ။4နှင့်ပုံ။ 7) ။ အားလုံးလေးခုမူးယစ်ဆေးဝါးများလည်း, ထို stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယထဲတွင် anterior commissure (IPAC) ၏ posterior ခြေလက်များ၏ Interstitial နျူကလိယΔFosBသော induction ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်စေလျက်, amygdala ရှုပ်ထွေးသော (ပုံ။ 8) တလျှောက်လုံး။ အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှတိကျသောအပိုဆောင်းသက်ရောက်မှုကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ကိုကင်းနှင့်အအီသနော, ဒါပေမယ့်မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်Δ9-THC, medial septum တွင်တွေ့မြင်ခြင်းမရှိသော induction နှင့်တကွ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက်ΔFosB၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်သွေးဆောင်တို့အားထင်ရှားလေ၏။ အားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါး hippocampus အတွက်ΔFosBသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်, အီသနော၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, ဒီ induction အများစုက dentate gyrus (စားပွဲတင်ငါနှင့်သင်္ဘောသဖန်း။ 9) တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဆနျ့ကငျြ, အီသနော dentate gyrus အတွက်အလွန်နည်းနည်းΔFosBသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်အစား CA3-CA1 subfields အတွက်ပရိုတိန်းများမြင့်မားသွေးဆောင်။ သာကင်းဟာခွဲ stantia nigra တွင်တွေ့မြင်ခြင်းမရှိသော induction နှင့်တကွ, ventral tegmental ဧရိယာ၌ΔFosBသွေးဆောင်သော်လည်းကင်း, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အီသနော, ဒါပေမယ့်မရΔ9-THC သည်, periaqueductal မီးခိုးရောင်အတွက်ΔFosB၏ induction ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်စေ (ဇယားကိုကြည့်ပါငါ ) ။
ထိန်းချုပ်မှုကြွက် (A) တွင်သို့မဟုတ်အီသနော (ခ), မော်ဖင်းအကိုက် (C), သို့မဟုတ်ကိုကင်း (D) နှင့်အတူနာတာရှည်ကုသမှုပြီးနောက် prefrontal cortex အတွက် osFosB ၏ induction ။ FosB ကဲ့သို့သော immunoreactivity အဆင့်များကို pan-FosB antibody ကို အသုံးပြု၍ immunohistochemistry မှလေ့လာခဲ့သည်။ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း (ဆက်လက်၍)
ထိန်းချုပ်မှုကြွက် (A) ၏ amygdala ၏ Basal နှစ် ဦး နှစ်ဖက်နှင့်အလယ်ပိုင်း medial အရေးပါသောအတွက်သို့မဟုတ်နာတာရှည်အီသနော (B), မော်ဖင်းအကိုက် (C), သို့မဟုတ်ကိုကင်း ()) ကုသပေးကြွက်များတွင် osFosB ၏ induction ။ FosB ကဲ့သို့သောခုခံအားကျဆင်းမှုအဆင့်များကို immunohistochemistry (ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း) မှဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
နာတာရှည်အီသနော (ခ)၊ မော်ဖင်းအကိုက် (ဂ) သို့မဟုတ်ကိုကင်း ()) ကုသမှုပေးသောကြွက်များတွင် osFosB ကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်ကြွက် (A) သို့မဟုတ်ကြွက်များတွင် induction ။ FosB ကဲ့သို့သော immunoreactivity အဆင့်များကို pan-FosB antibody ကို အသုံးပြု၍ immunohistochemistry မှလေ့လာခဲ့သည်။ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း (ဆက်လက်၍)
မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများနျူကလိယ accumbens နှင့် dorsal striatum အတွက်, ကင်း, စိတ်ကြွဆေး, စိတ်ကြွဆေး, မော်ဖင်းအကိုက်, နီကိုတင်းနှင့် phencyclidine အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအများအပြားအမျိုးအစားများ, ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ကူးယူအချက် induces ကြောင်းΔFosBသရုပ်ပြပါပြီ (ကိုးကားဘို့နိဒါန်းအပိုင်းကိုကြည့်ရှုလော့ McClung et al အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်, 2004; ။ Nestler et al, 2001 ။ ) ။ striatal ဒေသများတွင်ΔFosB၏ induction လည်းထိုကဲ့သို့သောဘီး-running အပြုအမူအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်၏နာတာရှည်စားသုံးမှုပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည် (Werme et al ။ , 2002) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, prefrontal cortex, amygdala, ventral pallidum, ventral tegmental ဧရိယာနှင့် hippocampus (လျူ et al အပါအဝင်အချို့နဲ့အခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosBသော induction ၏အောက်ခြေအဆင့်အတော်ကြာအစီရင်ခံစာများ, အဲဒီမှာပါပြီ, 2007; ။ McDaid et al, 2006a ။ 2006b; Nye et al, 1996; ။ ။ Perrotti et al, 2005), အလွဲသုံးစားမှုဤမူးယစ်ဆေးဝါးများအချို့ကိုတုံ့ပြန်သို့သော်ဦးနှောက်ထဲမှာΔFosB၏မူးယစ်ဆေးသော induction တစ်စနစ်တကျမြေပုံရှိဖူးပါ။ ထိုမှတပါး, အလွဲသုံးစားမှုအများစုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရှိနေသော်လည်းအရှိဆုံးကျယ်ပြန့်နှိပ်စက်တ္ထုများ, အီသနောနှင့်Δ9-THC နှစ်ယောက်ယနေ့အထိΔFosBသွေးဆောင်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်များအတွက်လေ့လာကြပြီမဟုတ်။ ကိုကင်း, မော်ဖင်းအကိုက်, အီသနောနှင့်Δ9-THC: ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်အလွဲသုံးစားမှုလေးယောက်ရှေ့ပြေးပုံစံမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဦးနှောက်ထဲမှာΔFosB၏ကနဦးမြေပုံထုတ်သယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၏အဓိကတွေ့ရှိချက်အီသနောနှင့်Δ9-THC, အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့, striatal ရှုပ်ထွေးအတွင်းကျယ်ပြန့်ΔFosB၏မြင့်မားသွေးဆောင်ကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ ဤရလဒ်သည်နောက်ထပ်အလွဲသုံးစားမှုနီးပါးအားလုံးမူးယစ်ဆေးတစ်ခုဘုံ, နာတာရှည်လိုက်လျောညီထွေအဖြစ်ကဤဒေသများတွင်ΔFosBသော induction တည်ထောင်ရန် (McClung et al ။ , 2004) ။ အဆိုပါ striatal ရှုပ်ထွေးအတွင်း induction များ၏ပုံစံအမျိုးမျိုးမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်အတန်ငယ်ကွဲပြားပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများ- မှလွဲ. အဘို့အΔ9-THC-သိသိသာသာနျူကလိယအတွက်ΔFosBသွေးဆောင်၏အားလုံးအဖြစ်ကောင်းစွာ shell ကိုနှင့် dorsal striatum accumbens နှင့်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်ရန်Δ9-THC အဘို့ခိုင်ခံ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းရှိခဲ့သည်သော်လည်းယင်းနျူကလိယအားလုံးစေ့စ့စပ်စပ်သွေးဆောင်ΔFosB, core ကို accumbens ဤအဆုံးစွန်သောဒေသများ။ အဆိုပါနျူကလိယ core နဲ့ shell ကိုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးလုပ်ရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြုပြီဖြစ်ပြခဲ့ကြသည့်အရေးကြီးသောဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများဖြစ်ကြသည် accumbens ။ အလားတူ, dorsal striatum မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ compulsive သို့မဟုတ်အလေ့အထကဲ့သို့သဘာဝနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Vanderschuren et al ။ , 2005) ။ အမှန်စင်စစ်ဤဒေသများတွင်ΔFosB၏ induction ကင်းရန်နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ကြိုးတုံ့ပြန်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်, နှင့် (အဖြစ်ကောင်းစွာ, ထိုကဲ့သို့သောဘီး-running အပြုအမူနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်မှ Colby et al တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီး, 2003; ။ Kelz et al, 1999; ။ Olausson et al, 2006; ။ Peakman et al, 2003; ။ Werme et al, 2003; ။ Zachary et al, 2006) ။ ။ နောက်ထပ်အလုပ်ကဤဒေသများတွင်ΔFosBသော induction အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှတစ်ဦးချင်းရဲ့ sensitivity အလားတူအလုပ်လုပ်တဲ့အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် mediates ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
striatal ဒေသများတွင်ΔFosB၏ induction မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကုသိုလ်ကံစားသုံးမှု၏တစ်ဦး function ကိုမဟုတျပါဘူး။ ညီမျှလက်ခံရရှိကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ထမ်းပိုးထိုးနျူကလိယ accumbens နှင့် dorsal striatum အတွက်ΔFosB၏တူညီသောဒီဂရီသွေးဆောင်ကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြသခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည် striatum အတွက်ΔFosBသော induction မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ကျော်တိရစ္ဆာန်ရဲ့ control ၏လွတ်လပ်သော, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးတစ်ခု pharmacologic အရေးယူကိုယ်စားပြုကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဆနျ့ကငျြဘသပိတ်မှောက်တှငျကြှနျုပျတို့ကိုကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးထမ်းဘိုးကိုကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး (Winstanley et al ။ , 2007) ကိုနှိုင်းယှဉ် orbitofrontal cortex အတွက်ΔFosBအတော်ကြာ-ခေါက်အဆင့်မြင့် induces ကြောင်းမကြာသေးမီကသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ΔFosBသော induction ၏ညီမျှသောအဆင့်ဆင့်အဲဒီနှစျခုကုသမှုအခြေအနေများအောက်တွင် prefrontal cortex တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြသောကြောင့်, ဒါကအကျိုးသက်ရောက်မှု, orbitofrontal cortex များအတွက်တိကျသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ΔFosBသော induction striatal ဒေသများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးမှုကျော်ကုသိုလ်ကံထိန်းချုပ်မှုမှဆက်စပ်မဟုတ်ပါဘူးပေမယ့်ထို့ကြောင့်ကြောင့်အချို့သောပိုမိုမြင့်မား cortical စင်တာများထိုသို့သောစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်များကလွှမ်းမိုးခံရဖို့ပုံရသည်။
လည်းကျနော်တို့ကအငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိယေဘုယျအားဖြင့်သော်လည်းအလွဲသုံးစားမှုလေးယောက်စလုံးမူးယစ်ဆေး, အ striatal ရှုပ်ထွေးအပြင်ဘက်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosBသွေးဆောင်ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန် semiquantitative ဒေတာ။ ဤရွေ့ကားကတခြားဦးနှောက်ဒေသများအတွက် prefrontal cortex, amygdala, IPAC, BNST နှင့် hippocampus ပါဝင်သည်။ ဒီကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့မရှိသေးပါပေမယ့် prefrontal cortex နဲ့ hippocampus အတွက်ΔFosB၏မူးယစ်ဆေးသော induction, သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုအချို့နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ amygdala, IPAC နှင့် BNST အားလုံးဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုမှတစ်ဦးချင်း၏တုံ့ပြန်မှုများကိုထိန်းညှိအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ ဤဒေသများတွင်ΔFosBသော induction အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်းစွာဆုလာဘ်ထက်ကျော်လွန်စိတ်ခံစားမှုအပြုအမူ၏မူးယစ်ဆေးစည်းမျဉ်း mediates ပြီးနောက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်။ ဒါဟာအနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေတွင်ဤဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီနေရာမှာလေ့လာခဲ့အလွဲသုံးစားမှုလေးယောက်မူးယစ်ဆေးဝါးများလည်းတချို့မူးယစ်ဆေး-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခင်ကအစီရင်ခံအဖြစ်ကိုကင်းထူးခြားသည် ventral tegmental ဧရိယာ၌ΔFosBသွေးဆောင် (Perrotti et al ။ , 2005) ။ ထိုနည်းတူစွာကိုကင်းနှင့်အအီသနောထူးခြားသည့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက်ΔFosB၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်သွေးဆောင်။ Δ9-THC အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းနျူကလိယထဲတွင် shell ကိုနှင့် dorsal striatum accumbens, အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ΔFosBသော induction အပေါ်လျော့နည်းသိသိသာသာသက်ရောက်မှုများအတွက်ထူးခြားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ Δ9-THC တခြားသူတွေအားလုံးကိုဆန့်ကျင်အဖြစ်, ဤမူးယစ်ဆေးကိုနာတာရှည်ထိတွေ့မှုလည်းထူးခြားတဲ့ခဲ့ periaqueductal မီးခိုးရောင်အတွက်ΔFosB၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်သွေးဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ hippocampus နှင့် septum သိမြင် function ကို၌၎င်း, ဤအဒေသများ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများတိရစ္ဆာန်၏တုံ့ပြန်မှုများကိုထိန်းညှိအတွက် periaqueductal မီးခိုးရောင်၏အခန်းကဏ္ဍကိုပေးထားသောဤဒေသများတွင်ΔFosB၏ဒေသနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-တိကျတဲ့သော induction ၏အရေးကြီးသောကဏ္ဍများဖျန်ဖြေပေးနိုင် ဦးနှောက်အပေါ်မူးယစ်ဆေးအရေးယူ။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, striatal ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများတွင်ΔFosBသော induction ကျယ်ပြန့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်ဦး shared နာတာရှည်လိုက်လျောညီထွေအဖြစ်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုအပိုဆောင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါး, အီသနောနှင့်Δ9-THC လည်း, ဤဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosBသွေးဆောင်ကြောင်းဤနေရာတွင်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံဒီအယူအဆတိုးချဲ့ပါပြီ။ ငါတို့သည်လည်းနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့တုန့်ပြန်ΔFosBသော induction ၏မတူညီဒီဂရီကိုပြသပေးသောသိမြင် function ကိုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ဦးနှောက်၏အခြားဒေသများ, ဖော်ထုတ်ရန်။ သည်အခြားဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်တုံ့ပြန်မှုပိုပြီးမူးယစ်ဆေးဝါး-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်သော်လည်းထိုအတုံ့ပြန်မှုအချို့ကို striatal ဒေသများတွင်ΔFosB၏ induction လိုပဲဒီမှာလေ့လာခဲ့အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးဘုံဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ယခုဤသူသည်အခြားဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်ΔFosBသော induction ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလက္ခဏာမှအနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအစမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲ syndrome တစ်ဘုံကုသမှုအဖြစ်ΔFosB၏ရန်များ၏အလားအလာ utility ကို define ကိုကူညီပေးပါတယ်။
ကြွက်များတွင် osFosB ကို Induction သည်ကြွက် (A) တွင်သို့မဟုတ်အီသနော (ခ)၊ မော်ဖင်းအကိုက် (ဂ) သို့မဟုတ်ကိုကင်း (D) နှင့်နာတာရှည်ကုသမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပလူတိုကို caudate putamen ဖြစ်သည်။ FosB ကဲ့သို့သော immunoreactivity အဆင့်များကို pan-FosB antibody ကို အသုံးပြု၍ immunohistochemistry မှလေ့လာခဲ့သည်။ (နောက်ထပ် …)
စာချုပ်ထောက်ပံ့ငွေစပွန်ဆာ: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသား Institute မှ။
1 ။ Alibhai IN, အစိမ်းရောင်က TA, Nestler EJ ။ fosB နှင့်ΔfosB mRNA စကားရပ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း: Vivo ခုနှစ်တွင်နှင့်စသည်တို့လေ့လာမှုများ၌တည်၏။ ဦးနှောက် Res ။ 2007; 11: 4322-4333 ။
2 ။ Atkins JB, Atkins J ကို, Carlezon WA, Chlan J ကို, Nye သူ, Nestler EJ ။ atypical antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများနှိုင်းယှဉ်ပုံမှန်၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ΔFosB၏ဒေသကြီး-တိကျတဲ့သော induction ။ synapses ။ 1999; 33: 118-128 [PubMed] ။
3 ။ Bachtell RK, ဝမ် YM, Freeman က: P, မြင့်တက် fo, Ryabinin AE ။ အရက်သောက်သုံးသွေးဆောင်ကူးယူအချက်များ၏စကားရပ်များတွင်ဦးနှောက်ဒေသ-ရွေးချယ်အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 847: 157-165 [PubMed] ။
4 ။ Beckmann လေး, Matsumoto ငါ Wilce PA ဆိုပြီး။ AP-1 နှင့် Egr DNA ကို-စည်းနှောင်လှုပ်ရှားမှုများအီသနောဆုတ်ခွာစဉ်ကကြွက်ဦးနှောက်အတွက်တိုးမြှင့်နေကြသည်။ J ကို Neurochem ။ 1997; 69: 306-314 [PubMed] ။
5 ။ Carl TL, Alibhai IN, Wilkinson ကို MB, Kumar ကတစ်ဦး, Nestler EJ ။ FosB တည်မငြိမ်ဖြစ်စေဘို့ Proteasome မှီခိုခြင်းနှင့်လွတ်လပ်သောယန္တရားများ: ΔFosBတည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက် FosB degron domains များနှင့်ဂယက်ရိုက်ဖျောထုတျ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007; 25: 3009-3019 [PubMed] ။
6 ။ Chen က JS, Nye သူ, Kelz ကို MB, Hiroi N ကို, Nakabeppu Y ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nestler EJ ။ electroconvulsive ဖမ်းဆီးရမိ (လိမ်လည်မှုများ) နှင့်ကိုကင်းကုသခွငျးအားဖွငျ့ΔFosBနှင့် FosB တူသောပရိုတိန်း၏စည်းမျဉ်း။ Mol Pharmacol ။ 1995; 48: 880-889 [PubMed] ။
7 ။ Colby CR, Whisler K ကို Steffen ကို C, Nestler EJ, ကိုယ်ပိုင် DW ။ ΔFosBကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 2488-2493 [PubMed] ။
8 ။ Criswell သူ, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ နာတာရှည်အီသနောကုသမှုကနေဆုတ်ခွာစဉ်ကတစ်ဦးလွန်း-box ကိုရှောင်ရှားခြင်းတုံ့ပြန်မှုဝယ်ယူအပေါ်အီသနောနှင့် flumazenil အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ br J ကို Pharmacol ။ 1993; 110: 753-760 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
9 ။ Ehrlich ME, Sommer J ကို, ကာန, E, Unterwald EM ။ Periadolescent ကြွက်တွေကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးတုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ΔFosB upregulation ပြသပါ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 9155-9159 [PubMed] ။
10 ။ Frye GD, Chapin RE, Vogel RA, စာပို့သမား RB, Kilts CD ကို, Mueller RA, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ အီသနောနဲ့နှိုင်းယှဉ်: ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် function ကိုအပေါ်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည် 1,3-butanediol ကုသမှုဆိုးကျိုးများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1981; 216: 306-314 [PubMed] ။
11 ။ Graybiel လေး, Moratalla R ကို, Robertson က HA ။ ဖက်တမင်းဆေးပြားနှင့်ကိုကင်း strio-အချို့-matrix ကိုအခန်းနှင့် striatum ၏ limbic subdivisions အတွက်က c-fos ဗီဇ၏မူးယစ်ဆေး-တိကျတဲ့ activation သွေးဆောင်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1990; 87: 6912-6916 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Hiroi N ကို, Brown က J ကို, မိုးသီးကို C, သငျတို့သ H ကို, Greenberg ME, Nestler EJ ။ FosB Mutant ကြွက်: Fos-related ပရိုတိန်း၏နာတာရှည်ကင်းသော induction ၏ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ကင်းရဲ့ psychomotor နှင့်အကြိုးသက်ရောက်မှုမှမြင့် sensitivity ကို။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1997; 94: 10397-10402 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ BT, Kosofsky B, Hyman SE, Nestler EJ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်နှင့်နာတာရှည်ကင်းအားဖြင့်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် binding က AP-1 ၏စည်းမျဉ်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1992; 89: 5764-5768 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ BT, Nye သူ, Kelz ကို MB, ကိုယ်ပိုင် DW, Iadarola MJ, Nakabeppu Y ကို, Duman RS, Nestler EJ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နာတာရှည်ကိုကင်းနှင့်အခြားနာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာပြောင်းလဲ Fos တူသောပရိုတိန်း၏ရေးစပ်ရှည်-တည်မြဲ AP-1 ရှုပ်ထွေးသော၏ induction ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1994; 13: 1235-1244 [PubMed] ။
15 ။ Kelz ကို MB, ချန် JS, Carlezon WA, Whisler K ကို Gilden L ကို, Beckmann လေး, Steffen ကို C, Zhang က YJ, Marotti L ကို, ကိုယ်ပိုင် DW, Tkatch R ကို, Baranauskas, G, Surmeier DJ သမား, Neve RL, Duman RS, Picciotto MR, Nestler EJ ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက်ΔFosB၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 1999; 401: 272-276 [PubMed] ။
16 ။ Knapp DJ သမား, Duncan က GE, သင်္ဘောသား FT, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်များအတွက်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား: အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း Fos တူသောပရိုတိန်းနှင့် ultrasonic အသံ၏ induction ။ အရက် Clin Exp Res ။ 1998; 22: 481-493 [PubMed] ။
17 ။ လျူ HF, Zhou WH, Zhu HQ, လိုင် MJ, Chen က WS ။ VTA သို့ M (5) muscarinic အဲဒီ receptor antisense oligonucleotide ၏ Microinjection FosB အဆိုပါ NAc အတွက်စကားရပ်များနှင့်ဘိန်းဖြူ sensitized ကြွက်များ၏ hippocampus ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ neuroscience Bull ။ 2007; 23: 1-8 [PubMed] ။
18 ။ McClung, CA, Nestler EJ ။ CREB နှင့်ΔFosBအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 1208-1215 [PubMed] ။
19 ။ McClung, CA, Ulery PG, Perrotti LI, Zachary V ကို, Berton အို Nestler EJ ။ ΔFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်တစ်ဦးကမော်လီကျူး switch သည်။ Mol ဦးနှောက် Res ။ 2004; 132: 146-154 [PubMed] ။
20 ။ McDaid J ကို, Dallimore je, Mackie AR, Napier TC ။ မော်ဖင်းအကိုက်-sensitized ကြွက်များတွင် accumbal နှင့် pallidal pCREB နှင့်ΔFosBအတွက်အပြောင်းအလဲများ: အ ventral pallidum အတွက်အဲဒီ receptor-evoked electrophysiological အစီအမံတွေနဲ့ဆက်စပ်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2006a; 31: 1212-1226 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ McDaid J ကို, ဂရေဟမ်အမတ်, Napier TC ။ စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ာင်း differential သည့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေကဦးနှောက်၏ limbic circuit ကိုတလျှောက်လုံး pCREB နှင့်Δ-FosB ပွောငျးလဲ။ Mol Pharmacol ။ 2006b; 70: 2064-2074 [PubMed] ။
22 ။ Moratalla R ကို, Elibol R ကို, Vallejo M က, Graybiel လေး။ နာတာရှည်ကင်းကုသမှုနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း striatum အတွက်သွေးဆောင် Fos-ဇွန်ပရိုတိန်း၏စကားရပ်ထဲမှာ Network ကို-Level အပြောင်းအလဲများကို။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1996; 17: 147-156 [PubMed] ။
23 ။ Muller DL, Unterwald EM ။ D1 dopamine receptors ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကြွက် striatum အတွက်ΔFosBသော induction modulate ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2005; 314: 148-154 [PubMed] ။
24 ။ Nestler EJ, Barrot M က, ကိုယ်ပိုင် DW ။ ΔFosB: စွဲများအတွက်တစ်ဦးကစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2001; 98: 11042-11046 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ Nye သူ, Nestler EJ ။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာနာတာရှည် Fos-related antigen ၏ induction ။ Mol Pharmacol ။ 1996; 49: 636-645 [PubMed] ။
26 ။ Nye သူ, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Kelz ကို MB, Iadarola M က, Nestler EJ ။ အဆိုပါ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်နာတာရှည် Fra (Fos-related ကိုပဲ) သော induction ၏ကင်းခြင်းအားဖြင့်စည်းမျဉ်းများ Pharmacological လေ့လာမှုများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1995; 275: 1671-1680 [PubMed] ။
27 ။ Olausson P ကို, Jentsch JD, Tronson N ကို, Neve R ကို, Nestler EJ, တေလာ FR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ΔFosBအစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူများနှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 9196-9204 [PubMed] ။
28 ။ Peakman MC, Colby ကို C, Perrotti LI, Tekumalla P ကို, Carl T က, Ulery P ကို, Chao J ကို, Duman ကို C, Steffen ကို C, Monteggia L ကို, Allen က MR, စတော့အိတ် JL, Duman RS, McNeish JD, Barrot M က, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ , Schaeffer အီးသွေးဆောင်, Transgene ကြွက်တွေမှာက c-ဇွန်၏အလွှမ်းမိုးအနုတ်လက္ခဏာ Mutant ၏ဦးနှောက်ဒေသ-တိကျတဲ့စကားရပ်ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2003; 970: 73-86 [PubMed] ။
29 ။ Perrotti LI, Hadeishi Y ကို, Barrot M က, Duman RS, Nestler EJ ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာΔFosB၏ induction ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 10594-10602 [PubMed] ။
30 ။ Perrotti LI, Bolanos, CA, Choi KH, Russo SJ, Edwards က S နဲ့, Ulery PG, Wallace: D, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ, Barrot အမ်ΔFosB psychostimulant ကုသမှုပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာ၏ posterior အမြီးအတွက် GABAergic ဆဲလ်လူဦးရေအတွက်စုဆောင်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2005; 21: 2817-2824 [PubMed] ။
31 ။ နီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းများ၏စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများများအတွက် Pich EM, Pagliusi SR, Tessari M က, Talabot-Ayer: D, Hooft ဗန် Huijsduijnen R ကို, Chiamulera C. အဖြစ်များသည့်အာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ။ 1997; 275: 83-86 [PubMed] ။
32 ။ SAMHSA ။ O. ဏ။ A. အလေ့လာရေး, အရက်နှင့်ဆေးဝါးပြန်ကြားရေးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Clearinghouse ။ Rockville, MD: NSDUH စီးရီးကို H-28; 2005 ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ် 2004 အမျိုးသားစစ်တမ်းကနေရလာဒ်: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွေ့ရှိချက်။
33 ။ sim-Selley LJ မာတင် BR ။ R ကို၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေး effect - (+) - [2,3-dihydro-5-methyl-3 - [(morpholinyl) methyl] pyrrolo [1,2, 3-de] -1,4-ခ enzoxazinyl] - (1-naphthalenyl) methanone mesylate ကြွက်တွေမှာ cannabinoid အဲဒီ receptor လိုက်လျောညီထွေအပေါ် (WIN55,212-2) သို့မဟုတ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (9) -tetrahydrocannabinol ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2002; 303: 36-44 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ Sutton MA, Karanian DA, ကိုယ်ပိုင် DW ။ ကြွက်များတွင် abstinence စဉ်အတွင်းကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများအတွက် propensity ဆုံးဖြတ်ရန်ကြောင်းအချက်များ။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 22: 626-641 [PubMed] ။
35 ။ Ulery PG, Rudenko, G, Nestler EJ ။ phosphorylation အားဖြင့်ΔFosBတည်ငြိမ်မှု၏စည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 5131-5142 [PubMed] ။
36 ။ Vanderschuren LJ, Di Ciano P ကို, Everitt BJ ။ cue-controlled ကင်းရှာထဲမှာ dorsal striatum ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 8665-8670 [PubMed] ။
37 ။ Werme M က, Messer ကို C, Olson L ကို, Gilden L ကို, Thorén P ကို, Nestler EJ, Brenéအက်စ်ΔFosBဘီးပြေးထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 8133-8138 [PubMed] ။
38 ။ Winstanley, CA, LaPlant မေး, Theobald DEH, အစိမ်းရောင်က TA, Bachtell RK, Perrotti LI, DiLeone FJ, Russo SJ, Garth WJ, ကိုယ်ပိုင် DW, Nestler EJ ။ orbitofrontal cortex အတွက်ΔFosBသော induction ကင်း-သွေးဆောင်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသည်းခံစိတ် mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 10497-10507 [PubMed] ။
39 ။ Young က ST, Porrino LJ, Iadarola MJ ။ ကိုကင်း dopaminergic D1 receptors မှတဆင့် striatal က c-fos-immunoreactive ပရိုတိန်းဖြစ်ပေါ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1991; 88: 1291-1295 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
40 ။ Zachary V ကို, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy အမတ်, Kelz ကို MB, Shaw-Lutchman T က, Berton အို Sim-Selley LJ, DiLeone RJ, Kumar ကတစ်ဦး, Nestler EJ ။ ΔFosB: မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBဘို့တစ်ခုမရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 205-211 [PubMed] ။